AC Contactor စက်ရုံ | China AC Contactor ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
JMC (GMC) စီးရီး 20A-200A AC Contactor
JMC (GMC) series AC Contactor သည်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား 660VAC 50Hz (သို့) 60Hz အထိရှိသောဆားကစ်များတွင်သုံးရန်သင့်တော်သည်၊ ဖောက်ထွင်းရန်၊ မကြာခဏစတင်ခြင်း၊ စက်ချိတ်ဆက်ခြင်းကိရိယာစသည်တို့အတွက်၎င်းသည်နှောင့်နှေးသော contactor ဖြစ်လာသည်။ mechanical inter-loking contactor, star-delta starter ဖြစ်သည်။ thermal overload relay နှင့်၎င်းကို electromagnetic starter သို့ပေါင်းစပ်သည်။ contactor ကို lEC60947-4 အရထုတ်လုပ်သည်။
CJX2-K (LC1-K) Series AC Contactors များ
CJX2-K series AC contactor သည် AC motor ကိုထိန်းချုပ်နှုန်းနှင့်ခဏခဏစတင်သည်နှင့်သင့်တော်သည်။ သင့်တော်သောအပူထုတ်လွှင့်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအဆက်သွယ်အဆက်အသွယ်ကိုပေါင်းခြင်းသည် overload ဖြစ်စေသော circuit ကိုကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် 1EC60947-4-1 နှင့်ကိုက်ညီသည်။
1. ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူချိန်: -5 ℃+40 ℃။ ၂၄ နာရီအတွင်းပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် +၃၅ ℃ထက်မပိုသင့်ပါ
၂။ အမြင့်: အများဆုံး ၂၀၀၀ မီတာ
၃။ လေထုအခြေအနေများ၊ အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိလျှင်အက်တမ်ပတ် ၀ န်းကျင်၏စိုထိုင်းဆဖြစ်သင့်သည် အများဆုံး ၅၀%တွင်အတော်အတန်နည်းသောအပူချိန်တွင်၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆဖြစ်နိုင်သည်။ လစဉ်နှင်းအများဆုံးဖြစ်မှုသည် ၉၀%ထက်မပိုနိုင်ပါ။ နှင်းကျဆင်းမှုကြောင့်အထူးအစီအမံများပြုလုပ်သင့်သည်။
၅။ တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား - Ⅲ
၆။ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများ: လျောက်ပတ်သောမျက်နှာပြင်နှင့်ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်အကြားယိုင်နှုန်းသည် II ထက်မပိုသင့်ပါ
10KV Insulating အပေါက် Clamp
CJX2-Fseries AC contractor (ဤတွင် contactor ကိုအတိုကောက်ခေါ်သည်) သည်အထူးကွိုင်တပ်ဆင်ထားလျှင်ပါဝါကြိမ်နှုန်း AC AC 50 Hz (သို့မဟုတ် 60 Hz) ပါ ၀ င်သော main circuit တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ be40 ~ 400Hz၊ အဆင့်လည်ပတ်မှုဗို့အား ၆၃၀v အထိ၎င်းအားသင့်တော်သောအဖြေ (သို့) အခြားယေဘူယျလျှပ်စစ်အသုံးချမှုတို့ဖြင့်စုစည်းလျှင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ လျှပ်စစ်နှင့်မော်တာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုများတွင်သုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အဆို့ရှင်အဆက်အသွယ်အဖွဲ့၊ လေနှောင့်နှေးခေါင်းနှင့်စက်နှိုးဆော်သံ (သို့) လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်အားဖြည့်အပူပေးစက်တို့တပ်ဆင်ထားသောစက်မှု interlock contactor အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
CJX2-K (LC1-K) Series AC Contactor Series ဖြစ်သည်
CJX2-K series AC contactors များသည် AC မော်တာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆားကစ်များနှင့်မကြာခဏစတင်သည့်အမြန်နှုန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ contactor ၏ auxiliary contact group ကိုတိုးပါ၊ သင့်တော်သောအပူခံ relay တစ်ခုနှင့်နေပါ၊ ဆားကစ်ကို overload မှကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် IEC60947-4-1 နှင့်ကိုက်ညီသည်
CJX2-D series AC contactor ဖြစ်သည်
CJX2-D series AC contactor သည် rated voltage 660V AC 50Hz သို့ 60Hz အထိလျှပ်စီးကြောင်းများအတွက်သုံးရန်သင့်တော်သည်၊ ဖောက်ထွင်းရန်၊ မကြာခဏစတင် & ထိန်းချုပ်သော AC motor ကိုအရန် contact contact block နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်၊ timer delay & machine-interlicking device စသည်တို့သည်၎င်းကို delay contactor, mechanical interlocking contactor, star-edlta starter. နှင့် thermal relay တို့ဖြင့် electromagnetic starter သို့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Dimension & Mounting အရွယ်အစား
AC-8a တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်လည်ပတ်မှုဗို့အား 50Hz (သို့) 60Hz သို့အဓိကသက်ဆိုင်သည်။
240V (သို့) 277V to 40A circuit တွင်သတ်မှတ်ထားသော current သည် single-phase AC Motors (compressors) များနှင့်အခြား single phase load များအတွက်စတင်ထိန်းချုပ်ရန်သင့်တော်သည်။
အဓိကအားဖြင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အထူးသဖြင့်လေအေးပေးစက်လုပ်ငန်းတွင်သုံးသည်။ ပြည်ပသွင်းကုန်တစ်မျိုးတည်းကိုအစားထိုးနိုင်ပြီးပြည်တွင်းရိုးရာထုတ်ကုန်များ၊
IEC 60947 နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ 4, UL508 နှင့် GB 14048 .4 စံချိန်စံညွှန်းများ
၁။Low VA coil သည်အေးသောလည်ပတ်မှုနှင့်သက်တမ်းတိုးစေသည်။
3.Universal style mounting bracket ရှိပြီးသား mounting တွင်းများ
၄။Double brake အဆက်အသွယ်များသည်အပြုသဘောဆောင်စေရန်နှင့်ချိုးရန်သေချာစေပါ။
၅။ ဝက်အူလမ်းကြောင်း (သို့) ဖိအားချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ၁/၄ နှစ်ဆအမြန်ဆက်သွယ်ပါ။
50-90 FLA အဲယားကွန်း Ac Contactor
LC1-D Series AC Contactor သည် rated voltage 660v, AC 50hz/60hz အထိ, current များကို 95A အထိအဆင့်သတ်မှတ်ရန်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်၊ မကြာခဏစဖွင့်ရန်နှင့်စက်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာစသည်တို့ကိုချိုး ဖျက်၍ ၎င်းသည် dalay contactor ဖြစ်လာသည်။ interlocking contactor, star-delta starter. thermal relay နှင့်၎င်းကို electromagnetic starter သို့ပေါင်းစပ်သည်။
CT Series အိမ်သုံး contactor
CT Series အိမ်သုံး AC Contactors များသည်လျှပ်စစ်ဗို့အား 400V AC 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz အထိရှိသောဆားကစ်များတွင်သုံးရန်သင့်တော်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအားကိုလျှော့ချရမည်၊ ထုတ်ကုန်များကိုမိသားစု၊ ဟိုတယ်၊ တိုက်ခန်းစသည်တို့အတွက်သုံးသည်၊ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောပေါက်နိုင်သည်၊ ထုတ်ကုန်သည် GB17885, IEC61095, EN61095 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်သည်။
JMC စီးရီး Ac Contactor
CJX2-D series AC contactor သည် rated voltage 660V AC 50Hz kr 60Hz အထိဆားကစ်အတွက်သုံးရန်သင့်တော်သည်၊ ဖျက်ရန်၊ မကြာခဏစတင် & ထိန်းချုပ်ရန်အပေါင်းအဆက်အသွယ်လုပ်ကွက်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်၊ timer delay & machine-interlicking device စသည်တို့သည်၎င်းကို delay contactor, mechanical interlocking contactor, star-edlta starter. နှင့် thermal relay ဖြင့်၎င်းကို electromagnetic starter သို့ပေါင်းစပ်ထားသည်။